Iindaba -Isixhobo sokuhambisa uxinzelelo kwidijithali "sigcwele ukunyaniseka"
Kwiminyaka yakutshanje, imeko yophuhliso lwezoqoqosho kunye netekhnoloji yenze utshintsho olukhulu. Iqhutywa sisizukulwana esitsha setekhnoloji yolwazi kunye netekhnoloji yoqhakamshelwano, uqoqosho lokwenyani lwelizwe lam ngokuqhubekekayo liphucule ubuchwephesha balo, unxibelelwano, kunye nenqanaba lobukrelekrele. Uqoqosho lwedijithali lufezekisile ukukhula ngokukhawuleza, hayi kuphela kwakudala nakokutsha. Ukuguqulwa kwamandla e-kinetic kudlale indima ephambili enjinini, kwaye ikwayinkxaso eqinileyo yotshintsho kunye nokuphuculwa kwamashishini emveli.
Okwangoku, "isiseko esitsha" sikhawulezisa ukuphunyezwa kwesizukulwane esitsha solwazi kunye neetekhnoloji zonxibelelwano ezinje ngobukrelekrele bokufakelwa, i-5G, ibhlokhi, i-Intanethi yezinto, ilifu lekhompyuter, njl., Izinto ezintsha kunye nokuphumelela kuyaqhubela phambili, kunye nokudityaniswa ngemimandla yezoqoqosho nezentlalo iya isiba nzulu nangakumbi, ikhuthaza "i-Intanethi yayo yonke into" kunye nokufika okwenyani kwexesha lobomi obukrelekrele. Kule meko, uphuhliso olukhawulezileyo lwezixeko ezikrelekrele, ukhuseleko oluqinisekileyo, ezothutho ngobukrelekrele. , iifektri ezikrelekrele, njl., iye yaqhubeka ukonyusa ibango lezixhobo ezifanelekileyo.
Ukusukela ngo-2019, ingeniso yeshishini lezixhobo lwasekhaya ikhule ngokuzinzileyo, kwaye ukusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo kunye neemitha ezixhotyiswe ngabenzi boluvo abahlukeneyo kuye kwanda ngakumbi. Ngokucacileyo, uthotho lwezinto ezithandekayo ezinje ngokunyuka kweemfuno zentengiso kunye nenkxaso yemigaqo-nkqubo yesizwe ibonelele ngeemeko ezifanelekileyo zophuhliso kunye nokwazisa ngezixhobo ezikrelekrele. Kwizixhobo ezikrelekrele, izilinganisi zoxinzelelo bezisoloko ziyindawo ebalulekileyo yolwahlulo.
Abangaphakathi kumzi-mveliso bakholelwa ukuba ngotshintsho oluqhubekayo lokuvelisa imveliso kunye notshintsho kwimveliso nakwimfuno zobomi, kuyakubakho iimeko ezininzi zesicelo ekufuneka zilinganise uxinzelelo oluncinci lwegesi, umphunga, inqanaba lolwelo, njl., Kwaye olu hlobo lwesixhobo yokulinganisa uxinzelelo oluncinci ibizwa ngokuba ngumhambisi woxinzelelo umahluko. Njengomboneleli ngenkonzo ye-interface esekwe kwismens eyaziwayo, iShanghai Mingkong iyile kwaye yaphuhlisa uthotho lwe-MD-S221 yokuhambisa uxinzelelo ngokwahluka kwezi mfuno zingasentla.
Ukuqala kwezona mfuno zentengiso kunye nabathengi, le MD-S221 yokuhambisa uxinzelelo yokuhambisa uxinzelelo lweShanghai Mingkong yamkela isivamvo soxinzelelo lwangaphakathi esathunyelwa njengenxalenye yento yoxinzelelo, kwaye ixhotyiswe ngombane wesekethe yedijithali, Ukuchaneka okuphezulu, izibonelelo eziphambili ezinje ngozinzo lwexesha elide, ukuchaneka kungcono kune-1% FS.
Kwangelo xesha, i-MD-S221 yokuhambisa uxinzelelo eyahlukileyo inokuqonda ukuboniswa koxinzelelo lwedijithali ye-LED yedijithali; 4-20mA / RS485 imveliso ungayikhetha; ikwanemisebenzi efana nokutshintsha nokucoca iyunithi; kwaye ixhasa idilesi / i-baud rate / isihluzo rhoqo / ukubonisa ukuseta amanani (uhlobo lwe-RS485); Imveliso ine-anti-electromagnetic design design yokufezekisa idatha ezinzileyo nethembekileyo; Ikwanayo ne-Exia IICT4 Ga yokuqhushumba-ubungqina.
Ukongeza, isixhobo sokuhambisa uxinzelelo esincinci sikaMingkong sinobungakanani bezindlu ezingama-83.7 × 83.7mm kwaye senziwe ngezinto ze-ABS. Iyakwazi ukufezekisa umbane wombane we-12 ~ 28V kunye nobushushu obusebenzayo be -40 ~ 80 ℃. Inempawu zoluhlu olubanzi lwezicelo. Ifanelekile ngakumbi kumacandelo afuna ukubekwa esweni koxinzelelo oluncinci, ezinje ngeenkqubo zokungenisa umoya, ukuthintela umlilo kunye nomsi kunye neenkqubo zokukhupha, ukubeka iliso kubalandeli, iinkqubo zokucoca ulwelo-moya, njl.